MAQAAL:Xadhiga Dhakool dhambiil uu ku gubtay Muuse Biixi & Dhaliil runta u sheegtay Beelaha kale – DMS
HomeWararkaMAQAAL:Xadhiga Dhakool dhambiil uu ku gubtay Muuse Biixi & Dhaliil runta u sheegtay Beelaha kale
MAQAAL:Xadhiga Dhakool dhambiil uu ku gubtay Muuse Biixi & Dhaliil runta u sheegtay Beelaha kale
12th May 2019 editor
Tan iyo markii ciidamada Booliska maamulka Somaliland ay xabsiga magaalada Hargeysa u taxaabeen Xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool oo kamid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliland ayaa waxaa ka taagan deegaano badan oo ka tirsan Somaliland hadal haynta xadhigiisa iyo xiisado hor leh oo ka dhex aloosan maamulka Somaliland iyo deegaanka uu kasoo jeedo Xildhibaanku oo ah gobolka Sool.
Maalintii shalay oo Sabti ahayd ayaa Xildhibaanka oo ay wehelinayaan qaar kamid ah ciidamada Booliska Somaliland oo gamcaha ka xidh xidhay Xildhibaan Dhakool ayaa waxa ay hor geeyeen maxkamadda magaalada Hargeysa, waxaana gudoomiyaha maxkamaddu uu meesha ka saaray in uu dhagaysto Xildhibaanka dacwadiisa oo uu sheegay in uu weli xasaanidiisii hayo taas badalkeedna laga rabo gollihiisa in ay ka qaadaan xilka si loo furo kiiskiisa dacwadeeda.
Qaar kamid ah ehelada Xildhibaan Dhakool oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in si xun loola dhaqmay Xildhibaanka xiligii laga soo qabanayey hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa isla markaasna waxaa la bur buriyey dhamaanba agabyadii yaalay gurigiisa halka loo diiday qoyskiisa in ay booqdaan, waxaana xarunta CID-da oo ah goobta uu ku xidhan yahay laga mamnuucay in ay fooda soo galiyaan asxaabtiisii, qoyskiisii iyo gudoomiyaha Baarlamaanka Somaliland Baashe Maxamed Faarax halka wax walba oo loo geeyo Xildhibaan Dhakool ay isticmaalaan ciidamada Booliska Somaliland oo hor taagan xoriyada masuulkani.
Hogaamiyaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isaguna xooga ku saaraya in Xildhibaanka uusan kasii mid ahaan gollaha wakiiladda Somaliland, waxaana uu haatan qorshaynayaan fal ka dhan ah Xildhibaan Dhakool.
Shakhsiga xadhigiisa ka dambeeya Xildhibaan Dhakool ayaa ah madaxweyne Biixi oo xiligani Somaliland ka dhigay hoy kali talisnimo, waxaana deegaanada qaarkood uu saaray xaalado deg deg ah halka uu goboladda Bari uu horeba u go’doomiyey.
Hadaba maxay tahay sababta ka dambaysa xadhiga Dhakool?
Dadka inta badan indha indheeya siyaasada Somaliland ayaa ka aaminsan xadhiga Dhakool in uu Muuse Biixi ka leeyahay aragti ah hanjabaad iyo caga jugleyn ah in masuul kasta oo Somaliland xil ka haya uu u hogaansamo aragtidiisa, taas badalkeeda hadii uusan samayn wax walba oo raali galinaya Muuse Biixi abaal gud looga dhigi doono xadhig.
Arinta labaad ee ka dambaysa xadhigiisa ayaa ah in madaxda Somaliland ee kasoo jeeda Beesha Isaaq ay u arkeen hadaladiisa kuwo kicin bulsho ah iyo in Beelaha qaarkood uu dagaal ka dhex qarxo amaba uu wado u noqdo hadalka Dhakool in Hargeysa ay ku kala haajiraan siyaasiyiinta kasoo jeeda Beelaha Harti taas oo fashil u horseedi kara Beesha dhexe ee ugu awooda roon Somaliland.
Dhakool dhaliishii Somaliland wax maka badali doontaa? Mase laga yaabaa in Muuse Biixi uu gacantiisa ku bur buriyo Somaliland?
Somaliland waa maamul goboleed la aas aasay 1991-kii, waxaana ay ka arimisaa goboladda Waqooyi ee dalka Soomaaliya.
Inkastoo hogaamiyaashii Somaliland soo maray ay u badnaayeen Beesha Isaaq ayaa waxaa hadana jirta aragti siyaasayiintu inta badan ay kusoo xera galiyaan bulshada, taas oo ah in Somaliland la wada leeyahay hasa yeeshee arintiisa ayaa xiligani fashil u muuqata kadib xadhigii Hargeysa loogu gaystay 9-kii Bishani May Xildhibaan Dhakool.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xiligani dadaal xoogan ugu jira cabudhinta cid walba oo aragti ku cabirteeda hadalkeeda, waxaana magaalooyinka Hargeysa, Burco, Boorame iyo Laascaanood xabsiyada loo taxaabay dhalin yaro fara badan iyo siyaasiyiin aragtidooda ku cabiray nidaam aan ka baxsanayn anshaxa saxaafada iyo midka siyaasadeed ee dalka.
Xisbiyada Mucaaradka ah iyo bulshada Soomaaliyeed ayaa ka wal walsan jiritaanka dambe ee Somaliland maadaama hogaamiye kali talis ah uu xiligani majaraha u hayo Somaliland, taas oo u muuqata in bur bur xoogan uu soo wajo inta Muuse Biixi hogaanka u hayo.
Muxuu dastuurka Somaliland ka qabaa xadhiga Dhakool?
Qodobka 79-aad ee Dastuurka Somaliland waxa uu qirayaa in Xildhibaan ka tirsan laba golle ee Guurtida iyo Wakiiladda Somaliland aanan xabsiga loo taxaabi karin maxkamaddna aan lasoo hor taagi karin ilaa laga qaado xasaanada oo gollihiisu cod gacan taagan ah ku meel mariyaan in uusan kamid ahayn.
Hadaba Dastuurka Somaliland hadii uu sidaasi dhigayo maxay tahay sababta lagu haysto Xildhibaan Dhakool? Mase la dhihi karaa Muuse Biixi waa skhaskhi ka shaqaynaya bur burinta Somaliland?
Kacdoonka gobolka Sool iyo Dagaal qabiilaysan oo dhici kara
Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxaa tan iyo xadhigiisii Dhakool ka socday kacdoono iyo is abaabul ay wadaan dhalinyaro iskood isku xil qaamay, kuwaas oo kasoo jeeda falka lagula kacay Xildhibaanka.
Xabsiga dhexe ee Laascaanood waxaa iyaguna u hoyday dhalinyaro aragtiyo ka dhiibtay xadhiga Dhakool, waxaana dhici kara in Beelaha wax tabanaya ay ku kacaan falal sii fogeeya xiisada oo dagaal uu ka dhex qarxo oodo kala durugsan oo masaafo dheer ay u dhaxayso walowse uu ka dhaga adaygay Muuse Biixi talooyin kala duwan oo loo jeediyey hadana waxa uu xalku ku jiraa in uu xoriyadiisa uu helo Xildhibaanku.
W/Qoray Abdirahman Jama
Afeef Warbaahinta Dalmar Media kama turjumayso aragti ahaan maqaalkani ee waxaa masuuliyadiisa iska leh shakhsiga u saxiixan.
Gudoomiyihii hore ee gobolka Sool oo Laascaanood lagu xidhay
DEG DEG:Ragii loo hayey kiiskii Caasha Ilyaas oo xukun lagu riday